Fikradaha naqshadaynta ee 25 ee ugu wanaagsan Sumadda iyo ragga - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadda 25 ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay ragga iyo dumarka
Sawirada dharka macneheedu waa hal wax fudud; xasiloonida. Xasilinta waxaa lagu muujin karaa xaalado kala duwan. Waxaa jira meelo badan oo nolosha ah oo midkasto noqon karto mid deggan oo hal dariiqo ah oo sharaf leh oo muujinaya in ay tahay mid tattoo ah. Isticmaalka tantujada #an waxaa isticmaala dad badan si ay u sheegaan sheekooyin aan qarsoodi ahayn oo ku saabsan waxa ay ku maraan marxaladaha qaarkood noloshooda.
Tattoo-istaaggu wuxuu u taagan yahay calaamad xooggan iyo xasillooni. Miyaad horay u aragtay tattoo qalabka? #Tattoo waxaa la bilaabay sanado badan kahor Sumeriiska. Tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah adduunka ugu da'da weyn adduunka, waxaana sidoo kale loo isticmaali jiray Masiixiyadii hore. Tani waxay ahayd markii lagu silcey sababtoo ah waxay aaminsan yihiin. Waxaa ka mid ah adeegga badaha ee hay'adaha badda sida: badda, awood, amniga iyo amniga,
1. Fikradda naqshadeynta jilicsan ee loo yaqaan 'tattoo' ayaa loogu talagalay lugta gabadha
Maalmahan, tattoo waxay noqotey mid caan ah oo aan aragno dad aad u tiro badan oo u yimaada tattoo sidan oo kale ah. Waxaa jira laba nooc oo ah dheelid jidheed; qaababka joogtada ah iyo habka ku-meel-gaarka ah. Doorashadu waa adiga inaad go'aansato.
2. Fikradda gacmeed ku samee tattoo mugdiga dumarka
Tattoo joogta ah ayaa si tartiib ah u jajabin kara da'da laakiin waxa laga yaabaa inuusan ka tagin jirka marka laga reebo isbeddelada ba'an.
3. Fikradaha muraayada lafdhabarta fariinta leh, Fadlan ha isdifaacin
Daaweynta laser waxaa la isticmaali karaa laakiin xanuunka la xidhiidha geedi socodku waa mid weyn.
4. Fikradda naqshadeynta farsamada gacanta ee loogu talagalay gabdhaha
Tani waa sababta ay dadku uga baqayaan inay u socdaan nooca tattoo. Qiimaha tani waa mid qaali ah kaas oo ah khasaare.
5. Fursadda naqshadeynta jilicsan ee loogu talagalay wiilasha
Tartoo ku meelgaar ah ayaa si fudud looga saari karaa. Dhiiggu wuxuu ku jiraa lakabyada maqaarka ee dibadda taasoo ka baxsan oo kaliya kaamilada. Waa inaad fahamtaa inaad lumiso qaar ka mid ah unugyada maqaarkaaga marka laga saaro.
6. Ubaxyo yaryar oo midab leh iyo fikradda tattoo ee bawdada
Ha ka welwelin unugyada maqaarka ee lumay sababtoo ah waxay ku soo laabanayaan waqti gaaban. Haddii aad ka fekereyso helitaanka tattoo tani ma hubo haddii ay noqon doonto waxa aad doonayso inaad muddo dheer sii wadato, u qaado naqshad ku meel gaar ah.
7. Isku-xidhka fikradda naqshadeynta jilbaha wiilasha
Dhibaatooyinka ka dambeeya tattoo ku-meel-gaadhka ah wax badan ma ahan marka la barbar dhigo tattoo joogta ah ee waqti qaadata si loo bogsiiyo ka dib markii laga saari karo.
8. Tattoo-ta lagu xiro fikradda naqshad u dhow suxulka
Waa in aanad degdegin si aad u hesho sawir tattoo ah haddii aad ku qanacsan tahay naqshadeynta. Tattoo this waxaa sameeyey by farshaxan xirfad leh oo sameeyey shaqo cajiib ah oo ay weheliso #ida ee user.
9. Biceps fikradda naqshadeynta tattoo ee wiilasha
Ma dareemaysid xanuun haddii uu yahay naqshad ku meel gaar ah. Si kastaba ha noqotee, kuwa doonaya in ay helaan tattoo ah in ay weligeed sii jiri lahaayeen, waa inaad diyaar u noqotaa inaad ku adkaysato xanuunka inta ay ka saareyso.
10. Ubaxyo yaryar oo midab leh iyo fikradda tattoo tilmaaneed ee gacanta
Ha iloobin inaad lumiso dhiiga marka ay timaado # ku-meel gaar ah oo ka duwan qaabeynta sawirka joogtada ah.
11. lamaanaha farsamooyinka tattoo ee gacanta
Weligaa ma yaabay sida taatuusha qurxoon ay u dhacday?
12. Garbaha gacmo dhaadheer fikradda tattoo ee haweenka
Wakhtiga soo galey, dareenka la bixiyay iyo kharashku waa qaar ka mid ah waxyaabo aad ka fiirsan kartid markaad u socoto tattoo. Waxaad leedahay wax badan oo madadaalo ah markaad leedahay tattoo cajiib ah sida tan. Ka fakar.
13. Meesha yar yar iyo cirifka fikradda naqshadeynta jimicsiga ee gabdhaha ku jira canqowga
14. Dhaqdhaqaaq dhaqameedka dhaqanka ee gacanta
Waxaa laga yaabaa inaad aragtid shaashadda xabbad-joojinta leh oo ay ku dhex faafinayaan ereyga 'Qoyska' oo ku qoran qoraalka. Mararka qaarkood, waxaad ka heli kartaa aabe ama hooyo iyaga. Erayadani waxay soo bandhigeen wadahadal ku saabsan xoog iyo xishood. Waxaad ku jiri kartaa xiriir ay ku dhufatay dhagax weyn oo marar badan, laakiin weli way u soo dhowaatay si ay u sameyso. Waxa aad u baahan tahay si aad u hesho waa tattoo anchor. il image
15. Caleemaha yar yar iyo fikradda naqshadeynta tattoo
16. Fikradda naqshadeynta tattoo maskaxda ee gabdhaha
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaanad helin tattoo qalabka ah waa inaad wax yar baaris ku sameysid nooca balanqaad ee ku habboon. Waxaa jira meelo badan oo shaati-galada ay ku nastaan ​​jirka jidhkiisa. Cabbirka tattoogu wuxuu ku xiran yahay meesha aad rabto in la dhigo. Xitaa dhinaca faraha ayaa noqon kara meel fiican oo ka baxsan tattoo qalabkaaga. il image
17. Dreamcatcher iyo fikrada tattoo ee loogu talagalay gabdhaha ku leh dharka
Qulqul-beel ayaa la sheegi karaa inuu yahay awood awood u leh in ay qabtaan markab ay saarnaayeen doonyahannada oo aan doonaynin inay dhaqaaqaan. il image
18. Fikradda sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka sawir-gacmeed oo loogu talagalay dumarka
Maanta, dadku waxay helayaan tattoosyo iyaga oo u sheegaya in ay istaagi karaan marka wax walba u muuqdaan inay hoos u dhacayaan. il image
19. Small lamaanaha fikradda tattoo ee gacanta
Isticmaalka shaati-xuduudaha ba'an ayaa sidoo kale noqon kara dammaanad isku xiraysa xidhiidh fog oo wadajir ah; xasuusin leh wax kasta oo wanaagsan oo ku saabsan dhacdada iyo xiriirka dhow ee xubnaha qoyska. il image
20. Sidee loogu talagalay umusha oo loogu talagalay gabdhaha
Haddii aad tahay qof tattoo shafeeco ah, isticmaalka dukumiintiyada istaandarka ah ayaa aad u dheeraan kara in lagu siiyo hadal taas oo aad u baahan tahay. il image
21. Bird iyo fikradda tattoo qallalan ee fikradda loogu talagalay gabdhaha cagta
Sidee baad u rabtaa inaad sameyso bayaanka tattoo? Waxaa jira meelo sida canqowga, qoorta iyo bawdada meesha aad isticmaali karto tattoo. il image
22. Heart iyo fikrada naqshadeynta tattoo ee gacanta ku jirta
Waxaad isku dhejin kartaa tattooadaada ubaxa, erayada, naqshadaha iyo qaabab kale oo badan. Mid kasta oo ka mid ah naqshadda la socota bareega tattoo waa quruxsan. il image
23. Shimbiraha xayawaanka ah ee haysta fikradda naqshadeynta tattoo ee loogu talagalay dumarka dib
Tattoos waxay noqdeen mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee dadka badanaa u socdaan maalmahan. Waad ka lumi kartaa isbeddelka adoo isticmaalaya tattoo qalooca qayb kasta oo kamid ah jirkaaga. il image
24. Fikradda sawir-qaadaha fariinta, marna ha fadhiistin
U fiirso naqshadaha kala duwan oo dooro adiga ugu fiican. il image
25. Dumarka kubbada leh ee kubad dhedig ah loogu talagalay qurxinta
tattoo maroodigaTattoo Feathertattoos qorraxdajimicsiga bisadahatattoos cagtatattoos qoortatattoo ah octopustattoos iskutallaabtaDhaqdhaqaaqasawirada malaa'igtacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahkoi kalluunkaTattoo infinitytattoos moonlammaanahatattoos saaxiib saxa ahshaatiinka shiidanwaxaa la dhajiyay tattoosTartoo ubax badanhenna tattooJoomatari Tattooswaxay jecel yihiin tattoostattoos sleevetattoos eagletattoos qosol lehsawirrada raggaarrow Tattoofikradaha tattooTilmaamta jaalaha ahlaabto laabtanaqshadeynta mehnditattoo indhahasawirada gabdhahaTattoos Wadnahasawir gacmeedtattoo biyo ahgaraacista gacmahatattoosshimbir shimbirlibto libaaxtattoos gacantataraagada kubbaddatattoo tilmaantattoos ubaxgadaal u laaboku dhaji tattoostattoo dheemantattoos qabaa'ilkatattoos taajkiimuusikada muusikada